Torolàlana ho an'ny tanjaky ny tanjany: Tracker an'ny fasika mandrakizay
Aloha! Androany aho mitondra mpitari-dalana anao hanao ny zava-bita tanjaka Eternal Sands Tracker miaraka amin'ny tendrombohitra ...
Torolàlana ho an'ny Warlord Zon'ozz / Warlord Zon'ozz, Boss faharoa an'ny Soul Dragon / Dragon dragon ...
Yor'sahj the Watchman / Yor'sahj the Torolàlana Tsy Matory
Torolàlana ho an'i Yor'sahj the Watchman / Yor'sahj ilay tsy Matory, lehiben'ny tarika Soul Dragon / Soul Dragon….
Torolàlana ho an'ny Ultraxion, lehiben'ny vondrona Dragon Soul / Dragon Soul. Ny Ultraxion dia fahavetavetana lehibe kokoa amin'ny angovo ...
Hagara la Binder Guide / Hagara the Stormbinder, lehiben'ny fahefatra an'ny andian-fanahy Soul / Dragon Soul. Hagara, iray amin'ireo mpianatra voalohany indrindra tamin'ny majika Arcane teo amin'ireo Forsaken, dia nampiseho fahagagana mahavariana ho an'ny olona iray izay nanomboka nahalala ity zavakanto ity tara loatra. Saingy tamin'ny andrana tsy voafehy nataony mba hifehezana ireo singa fototra, dia resin'ny Tompon'ny rivotra, Al'Akir izy. Ankehitriny miaraka amin'ny tsy fivadihana mafy amin'ny Twilight's Hammer, Hagara dia manome an'ireo niharam-boina hampijalijalina ireo niharam-boina. Yor'sahj dia mikasa ny hahazo valisoa maizina amin'ny asa fanompoana nataony tamim-pahatokiana.
Torolàlana Morchok, lohan'ny voalohany ny Gang band Soul / Dragon fanahyMorchok no singa matanjaka indrindra izay mijanona eo ambanin'ny fitaoman'i Deathwing, mpiambina mandalo fotsiny, nefa izao dia resy lahatra izy fa tsy hahita afa-tsy fandriampahalemana amin'ny famotehana an'i Azeroth. Nanafika mafy ny tsangambaton'ny Tempolin'ny fitsaharana an'ny dragona i Morchok, ny faritry ny volafotsy farany ho an'i Azeroth amin'ny Andron'ny takariva.
Torolàlana amin'ny hadalan'ny fahafatesan'ny maty / hadalan'ny fahafatesana
Torolàlana momba ny fahaverezan'ny fahafatesana / Hadalana amin'ny fanamelohana ho faty, lehiben'ny andiam-panahy Soul Dragon / Soul Dragon. Tsy azo atao ny mampijanona io volotara feno fankahalana maharikoriko io sy ny hery tsy refesina, ity biby goavambe tsy misy endrika sy tsy misy saina ity. Ny sisa tavela amin'i Neltharion the Guardian of the Earth dia nanjavona taloha ela be, samy ny sainy sy ny fanahiny no simba ary nohanin'ny tompon'ny andriamanitra taloha. Ny hany zavatra tadiavin'ity zava-mahatsiravina ity dia ny manimba, mamotika ary mamarana ny zavatra rehetra.
Torolàlana momba ny torolàlana momba ny fahafatesana
Torolàlana ho an'ny hazondamosin'ny fahafatesana / Hazondamosin'ny fahafatesana, no voalohany amin'ireo fifandonana roa nifanandrina tamin'i Deathwing tao anatin'ny fanafihana Soul Dragon / Soul Dragon. Manomboka amin'ny Dragonblight ny ady satria afaka mitsambikina any aorian'ny Deathwing ny mpilalao, manandrana manalemy ny fiadiany mba hanafika ireo mpiara-dia aminy, ary mifarana rehefa resy izy ary midona amin'ny Maelstrom. Rehefa namindra ny herin'ny Soul Dragon tamin'ny sisan'ny sidina i Deathwing, dia navotsotra ny hery lehibe toy izany ka saika notapahin'izy ireo izy. Tsy namela an'ity fitaovam-piadiana ity izy fa nametraka takelaka adamantium teo amin'ny mizana mba hitazomana ny vatany. Taty aoriana dia nohamafisiny tamin'ny elementium ireo takelaka ireo, izay nanjary ny hany fahalemeny, ny hany teboka marefo amin'ny Deathwing mahafaty.
Warmaster Blackhorn / Torolàlana Warmaster Blackhorn
Blackhorn Warmaster's Guide / Warmaster Blackhorn, lehiben'ny fahenina an'ny andian-fanahy Soul / Dragon Soul. Raha vantany vao be dia be ny isan'ny dragona Twilight, saingy am-polony vitsivitsy monja amin'izy ireo sisa. Ny valiny farany an'ny tafika Hammer Twilight dia mampiasa ireto tafita velona ireto ho toy ny iraka manokana an'i Deathwing, dia ny Drake Riders sangany. Notarihin'ny Blackhorn, warlord mpiady ratsy fanahy, izy ireo dia nokendren'ny fikasana maizina, hiaro ny tompony maizina.
Soul Dragon / Soul Dragon
El Dragon fanahy / Dragon fanahy Io no tarika farany fanitarana Cataclysm navoaka tao amin'ny Patch 4.3.0. Afaka mandray anjara amin'ireo andian-jatovo misy mpilalao 10 sy 25 ianao izay hiatrehanao ny sefo Hatramin'ny fahafatesany, miaraka amin'ny fahafaha-misafidy ambaratonga telo amin'ny sarotra sy hahazoana fitaovana epic.
Torolàlana ho an'i Ragnaros, ilay Tompon'ny afo
Ragnaros, tompon'ny Firelands, dia maneho ny fahatezerana sy ny fanimbana ny afobe voalohany izay namboarin'i Azeroth. Nampanantena ny handrehitra an'i Azeroth tsy misy fanelingelenana avy amin'i Neptulon na Therazane i Ragnaros te-hampionona ireo andriamanitra taloha tamin'ny fandoroana an'i Nordrassil, ilay World Tree.
Tipo: Lord Elemental
fahasalamana: 50.000.000  / 151.000.000 
Ragnaros dia tezitra ao amin'ny efitranony ary ilaina ny fandresena ny ambin'ny sefo hahazoana miditra amin'ny efitranony. Vonona ny hamonjy anao ve i Sulfuras?